चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ निष्काशन सुरू, कति कित्ता दिने आवेदन ? - HelloKhabar
चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ निष्काशन सुरू, कति कित्ता दिने आवेदन ?
२०७७ पुष २४, शुक्रबार १०:५०
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको आईपीओ आज (पुस २४ गते) देखि निष्काशन खुल्ला भएको छ । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता शेयर मध्ये ४ प्रतिशत कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत शेयर सामुहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको १३ लाख ९६ हजार ४४ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन सुरु गरेको हो । उक्त आईपीओमा पुस २४ गतेदेखि छिटोमा पुस २८ गतेसम्म र ढिलोमा माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
पछिल्लो समय आईपीओमा साढे १० लाख बढी लगानीकर्ताले आवेदन दिने गरेका छन् । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि १३ लाख ९६ हजार २२ कित्ता शेयर मात्र बिक्रीमा ल्याएको छ। धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार हरेक आवेदकलाई १० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार गोलाप्रथाबाट १ लाख ३९ हजार ६०२ जनाले मात्र न्यूनतम १० कित्ता शेयर पाउनेछन्। यसकारण यस कम्पनीको शेयरमा १० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिनु उपयुक्त हुने बताइन्छ ।
ब्यानर हेलाेखबर - २०७७ पुष २४, शुक्रबार १०:५०
फिचर २०७७ पुष २४, शुक्रबार १०:५०